Forum serasera malagasy sinoa karana ary ireo foko samihafa eraky i Gasikara - Dinika forum.serasera.org
sinoa karana ary ireo foko samihafa eraky i Gasikara
Fitohizan'ny hafatra : sinoa karana ary ireo foko samihafa eraky i Gasikara
saho - 21/01/2014 20:11
voalazan ny tantara fa anisan ny mponina efa tranainy tao Gasikara ny sinoa sy karana
Porofo mazava ireo mpiasa sinoa sy karana taloha niaraka nanamboatra ny lalamby ny faritra atsinanana (Tamatave sy Fianarantsoa,Manakara) maro koa ireo namoy ny ainy noho ny asa mavesatra sy ireo loza tsy nahy na gasy na mpiavy hafa
isika malagasy dia mpiavy daholo, tsiss vahoaka tranainy afa tsy ireo biby lemurien sns...
Mpiavy avokoa isika misy avy ao Afrika (Ethiopie sns) , Asie (Indonesie, Malaisie,Inde, Chine sns...), europeen sns...
Isika anefa dia toerana Nosy ary mifanaraka sy mifanajara ara pinoana (Hindou, Boudiste, silamo, kristiana, ody gasy sns....) nisesisesy teo, saingy ankehitriny dia nisy fiovana
Raha natiora ny Religion dia mino fadifady etsy sy eroa, kanefa ankehitriny dia tsy eken ny finoana kristiana intsony fa hoe efa lany andro
dia ho lany andro koa izany ny nampisy ny martiora malagasy tetsy sy teroa taloha
angamba dia hanjavona Amin ny kolilkoly malagasy ny fomba rehetra izay naha izy azy ny Gasikara afaka taona maro, ringana tanteraka, ny tsara tokony raisina sy tohizana atao ary ny ratsy ariana toa ny voankazo an ala
isika ve mandroso sa miverina
amiko miverina any ankady satria manaraka ny fomba hafa, taloha ny bainga mivadika tsisy sahy maka, na koa ireny lohasaha ireny dia efa nahitana hoe misy ny fomba entina hifanajana
ankehitriny miverina any ankady ny toetsaina sasany, tsiss vokatsoa
Lafrantsa nanimba kolontsaina malagasy taloha sy ankehitriny
Mahaiza mifidy tsara ny lalana hizorana mba tsy ho very any ankady
hery - 22/01/2014 10:46
Amiko dia misy lafy tsarany sy lafy ratsiny ny fandrosoana sy ny fanatontoloana. Ny fifandraisana amin'ny hafa dia tsy maintsy misy vokany tsra sy ratsy foana. Ka mba vokany ratsy aloha ireo lazainao ireo.
Anjaran'ny fiarahamonina tsirairay no mandanjalanja sy mandray ny fifampikasohany amin'ny fandrosoana. Efa samy nandalo an'izany avokoa ny fiaraha-monina amin'ny firenena mandroso kanefa dia betsaka tamin'izy ireo no nahay nandray izany fandrosoana izany hampivoarana ny mponina ao aminy... kanefa mbola mahatazona ny fomba amam-panaony ihany.
Tsy ny fandrosoana na ny fivoarana izany no ratsy fa arakaraka ny fandraisana azy.
Ny frantsay koa anie tamin'ny fotoan'androny (izany hoe mbola tsy frantsay izy tamin'izany) dia nozanahan'ny romana e. Ahoana nefa no nandraisany izany?
Samy manana andraikitra ny tsirairay fa tsy miankina amin'ny mpitondra fotsiny, na mpitondra ara-politika io na ara-pivavahana na ara-piaraha-monina. Dia rehefa mahatsapa tena dia raiso aloha ny andraikitra amin'ny fianarana sy famakafakàna ny fivoaran'ny hafa nefa tsy manadino ny an'ny tena.